မြန်မာနိုင်ငံ | မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား အရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များ | MyJobs
Result page 1 for မြန်မာနိုင်ငံ ရှိ မှ အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား အရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များ
အလုပ် 41 ခုကို တွေ့ရှိပါတယ်။
FMCG အရောင်းပိုင်းအတွေ့အကြုံ (၁)နှစ်အထက်ရှိသည့်မည်သူမဆို ဝင်ရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။
Oversee and lead development, implementation and monitoring of sales force effectiveness framework, plans, training, processes, tools and systems, etc., to drive sales growth and sales force productivity in Modern Trade.
A Channel Manager is responsible for improving customer consumption; planning and implementing customer presentations, monitoring competitor activity, help all communications with resellers, creating plans for growing market share and communicating channel activities.
မန္တလေး | အချိန်ပြည့်အလုပ်အမျိုုးအစား | MMK 400,000 - 600,000
Preorder Sales Rep. (လှိုင်၊ စမ်းချောင်း၊ ကြည့်မြင်တိုင်၊ အလုံ မြို့နယ်) အမြန်အလိုရှိသည်
To provide full operational activities of retails channel’s sales pre-orders and coordinate with sales admin. Responsible for acquiring new customers and maintaining good relationships with both potential and existing customers within assigned territory. To build trust and act as support for prospects, ensuring they lead to potential customer.
To Work in Marketing Department
Position purpose - Manage, Monitor and Implement the activities of the sales team within Upper Myanmar to achieve established sales targets.
အရောင်း နဲ့ပက်သက်တဲ့အလုပ်အကိုင်များ 41
စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်း၊ ငါးလုပ်ငန်းနှင့် သစ်တောလုပ်ငန်း6မော်တော်ယာဉ်နှင့် လေကြောင်းလုပ်ငန်း2ဘဏ် ၊ ငွေကြေးလုပ်ငန်း နှင့် အာမခံလုပ်ငန်း 1 ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း5ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်း3နည်းပညာနှင့် ဆက်သွယ်‌ရေးလုပ်ငန်း2ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် သိုလှောင်လုပ်ငန်း6လက်လီးအရောင်း /အ၀ယ်လုပ်ငန်း၊ ဖက်ရှင် နှင့် လူသုံးကုန် စားသောက်ကုန်လုပ်ငန်း 14 သင်္ဘောလိုင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း 2
မန္တလေး 11 ရန်ကုန် 28 မြန်မာပြည်အတွင်း 2
Expats Preferred 16 Repats Preferred 4